भिडियो कसरी कब्जा गर्न? यस को लागि सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम
एकदम अक्सर कार्यक्रम पूरा मार्फत आउन भिडियो खिच्न। एक यस्तो कार्यक्रम भिडियो कम्प्युटर प्रदर्शन संग, तर पनि camcorder देखि मात्र होइन रेकर्ड लागि एकल संकुचित र सजिला सफ्टवेयर छ जो Debut भिडियो, छ। पनि सफ्टवेयर उपकरण एकदम सहज र इन्टरफेस कार्यहरु यस उपयोगिता छ, उनको संख्या र सुविधाहरू चकित गर्न सक्षम पचाउन सजिलो छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद। उदाहरणका लागि, प्रयोगकर्ता भिडियो ढाँचाहरूमा मा, यस्तै सफ्टवेयर बीच धेरै लोकप्रिय नभएका ती सहित बचत गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम पनि यसको धेरै कार्यहरु को प्रयोग गरेर इन्टरनेटमा क्लिप खुला बिछाउने सुविधा।
क्यामेरा भिडियो खिच्ने एक कार्यक्रम छ जो मुख्य आवेदन, हो:
समारोह पूर्व-रेकर्ड। यो उपकरण BroadCam पोर्टल मा रेकर्ड क्लिप राख्नेछ।
भिडियो समारोह सिर्जना गर्नुहोस्। यो सुविधा भिडियो ट्यूटोरियल र प्रस्तुति सिर्जना गर्न योगदान पुग्छ। साथै, उपयोगिता भिडियो खिच्न थप कुशलतापूर्वक भयो लागि उपयोगी पुस्तिका हो कि सिफारिसहरू समावेश गर्न सक्षम छ।
रेकर्ड समारोह। यो समारोह प्रेस विज्ञप्ति वा विज्ञापन सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ। पनि यस आवेदन मद्दत संग videozapiski, व्यापक कार्यालय मा लोकप्रिय जो लिखित गर्न सकिन्छ। साथै, यो सुविधा ई-मेल गरेर परिणामस्वरूप क्लिप व्यक्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
Debut भिडियो कार्यक्रम को फाइदा यसको निःशुल्क वितरण छ। तपाईंको वेब क्यामेरा बाट भिडियो कब्जा सफ्टवेयर इन्टरफेस स्पष्ट र अनुकूल छ, र कार्यक्षमता वस्तुतः अपार हो, धेरै सरल छ। स्थापना उपकरण धेरै सजिलो छ। यो तपाईं क्लिप सिर्जना गर्न सुरु गर्न सक्छन् जो पछि मात्र केही मिनेट, आवश्यक हुनेछ।
यो सफ्टवेयर को धेरै सुविधाहरू बीचमा निम्न सुविधाहरू छन्:
भिडियो स्क्रिन क्याप्चर व्यक्तिगत कम्प्युटर वा ल्यापटप को हार्ड ड्राइभमा ठाउँ लिन्छ।
यो एक रेकर्ड भिडियो लोकप्रिय विस्तारहरू र अस्पष्ट दुवै सहित विभिन्न स्वरूप, प्ले गर्न सम्भव छ।
यो एक वेब क्यामेरा वा अन्य यस्तै उपकरणबाट रेकर्ड गर्न सम्भव छ।
प्रयोगकर्ता स्वचालित रूपमा रेकर्ड सुरु गर्न एक निश्चित समय तालिका मा भिडियो खिच्न समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं व्यक्तिगत कब्जा फ्रेम बनाउन सक्छ।
तिनीहरूले धेरै छन् किनभने यो समारोह सफ्टवेयर उपकरण मा, त्यहाँ अन्त छैन, र सबै, बस पर्याप्त समय वर्णन गर्न। यदि तपाईंलाई थाहा छैन, सफ्टवेयर को सहायता तपाईंलाई एक कब्जा गर्न सक्छन् स्क्रिनमा भिडियो कम्प्युटर वा वेब क्यामेरा, को Debut भिडियो उपकरणको लागि भिडियो खिच्ने, तर पनि थप सम्पादन र नेटवर्क मा राख्न संभावना लागि मात्र होइन एक उत्कृष्ट समाधान हुनेछ। काम र आनन्द लागि दुवै: यो कार्यक्रम शाब्दिक एक उत्कृष्ट र वफादार सहायक भिडियो विषयमा कुनै पनि प्रश्न तपाईं को लागि हुनेछ।
Duolingo: समीक्षा। Duolingo विदेशी भाषा सिकेर लागि सबैभन्दा लोकप्रिय अनुप्रयोग हो
त्रुटिहरू लागि आफ्नो कम्प्युटर स्क्यान गर्न कार्यक्रम। सबै भन्दा राम्रो को समीक्षा
कसरी "Vayber" कम्प्युटर मा जडान गर्न: सक्रियता स्मार्टफोन र प्रोक्सी बिना
कसरी सही ड्राइभर हटाउन?
गुफा भालू एक बलियो दुश्मन जनजातिको नेता जस्तो छ
कति सुन्दर र सही विवाह कार सजाने
Bionics - विज्ञान को एक प्रकारको? के bionics अध्ययन छ? bionics को आवेदन